Gotland - Krisinformation.se
Tester, vaccin, läkemedel, behandling
توصيات إقليمية أكثر صرامة
Talo bixinta guud ee gobolka oo laga sii adkeeyey
Daha katı bölgesel tavsiyeler
رهنمودهای سختگیرانه تر محلی
یمت لند هریه دالن
استان یون شوپینگ
ጥብቂ ወረዳዊ መምርሒ
የምትላንድ- ሀርዬዳለን Jämtland Härjedalen
ዞባ ዮንሾፒንግ Jönköpings län
ዞባ ካልማር Kalmar län
ቨስትራ ዮታላንድ Västra Götaland
Hårdare regler i regioner
Använda munskydd på rätt sätt
Sommaren under covid-19
Vaccin, läkemedel och behandling
Skärpta regionala råd
TB22 Skärpta regionala råd So
Qof kasta oo gobolka jooga waxa lagu dhiirigelinayaa inuu:
Haddii ay suurtogal tahay iska ilaali inaad xiriir jidhka/taabasho jir ahaaneed la yeelato dadka kale aan ahayn kuwa aad la nooshahay. Waxa uu taas micnaheedu yahay waxa ka mid ah in lagaala talinaayo inaad qabanqaabisid ama ka qeybqaadatid xaflad iyo iskutagyada bulshada ee kale ee la midka ah. Waa in sidoo kale laga fogaado waxqabadyada qaar aan la sameyn karin iyadoo aan masaada dadka kale laga fogaanaynin, sida isboortiga la istaabanaayo ama daryeelka caafimaadka iyo is qurxinta oo aan caafimaadka xiriir la laheyn.
Iska ilaaliso joogitaanka bay'adaha gudaha sida dukaamada, xarumaha ganacsiga, matxafyada, maktabadaha, goobaha dabaasha iyo jiimka. Booqashooyinka daruuriga ah ee tusaale ahaan lagu tagaayo dukaamada raashinka iyo farmashiiyaha ayaa la sameyn karaa.
Iska ilaali inaad ka qeybqaadato, tusaale ahaan shirarka, riwaayadaha, bandhigyada, tabobarada isboortiga, kulamada/ciyaaraha iyo tartamada. Laakiin taasi ma khuseyso tabobarada isboortiga ee carruurta iyo dhalinyarada dhalatay 2005 ama wixii ka danbeeyey.
Xiriirada dhowdhow ee daruuriga ah, sida booqashooyinka daryeelka caafimaadka iyo baaritaanka caafimaadka, ayaan ku jirin talooyinka la soo jeedinaayo. Qofka calaamado laga yaabo inay noqon karaan covid-19 leh waa inuu ka fogaadaa dhamaan xiriirada dhowdhow ee dadka kale oo dhan.
Talo bixinta guud ee laga sii adkeeyay ee la xiriirta goobaha shaqada iyo waxqabadyada
Waxqabadyada iyo loo shaqeeyeyaasha waxa inay qaadaan talaabooyin si uu qof kastaa ugu raaci karo talooyinka guud. Talaabooyinka loo shaqeeyayaashu waxay noqon karaan ku dhiirrigelinta shaqaalaha inay guriga ku shaqeeyaan, iyadoo la siiyo fursado dheeri ah oo ay guriga kaga soo shaqeynayaan, iyo in dib loo dhigo safarada shaqadu dadka dirto, shirarka iyo kulammada kale ee jir aheed/tooska ah. Waxqabadyada kale waxay dhimi karaan tirada soo booqdayaasha ah ee isla waqti joogta, lagu beego saacadaha furitaanka, oo la soo bandhigo fursadaha waxqabadka dhijitaalka ah.
Ugu badnaan sideed qof dhacdooyin iyo shirar
Laga bilaabo 24 Noofambar 2020 waa inay keliya sideed qof ay ka qeybqaataan isku imaadyada/isku ururida dadweynaha iyo kulamada guud. Waxay taasi sidoo kale khusaysaa dadweynaha wax daawanaaya ee fadhiya. Go'aanku waxa uu sii shaqeeyo doonaa ilaa muddo. Waxa laakiin ka reebanaan loo sameynaaa aaska. Halkaas waxa la oggol yahay ugu badnaan 20 ka qeybqaate.
Xagaaga Iswiidhan gudeheeda inta uu jiryo covid-19
Uppdaterades 25 nov 2020 15:12